प्रशंसापत्रहरू ADD / ADHD - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
प्रशंसापत्र ADD / ADHD
Aigars Freimanis बाट प्रशंसापत्र
रीगा, लाटभिया, युरोप
अप्रिल 22, 2017
डेभिड अलर्ट प्रो खरीद गर्न तपाईंको समर्थनका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। एक महिना बितिसकेको छ जब मैले दिमाग मेसिन प्राप्त गरें र मैले यसलाई आफ्नो छोरासँग सेटल हाइपरएक्टिभिटी मोड हरेक बिहान र बेलुका सत्र हरेक बेलुका प्रयोग गरें। मैले उसको ब्यबहारमा उल्लेखनीय सुधारहरू भेट्टाए। उसले धेरै राम्रो कुरा सिक्न पनि शुरू गरेको छ र शिक्षकहरूबाट आफ्नो पहिलो सकारात्मक मूल्यांकन प्राप्त गरेको छ। अर्को म एकाग्रता र तर्कको लागि मूड सत्र अभ्यास गर्ने योजना गर्दैछु।
डॉन अस्टिनबाट प्रशंसापत्र
सबै भन्दा पहिले, "वाह !!" कस्तो जीवन परिवर्तक! म अब Adderall लिदै छु र मेरो मेमोरीमा सुधार आएको छ, मेरो hyperactivity चलाइएको छ - म नयाँ व्यक्ति हुँ! ALERT प्रो पक्कै एक खेल परिवर्तक भएको छ!
लिन एलिसन नेल्सनबाट प्रशंसापत्र
नोभेम्बर 29, 2015
म इमान्दार भई मेरो डेभिड बिना बाँच्न सक्दिन प्रसन्नता प्रो। यसको CES एक्लै कार्यले अमेरिकी मोडेलको गुणस्तर पार गर्छ! तर यति धेरैको साथ एक उपकरण छ! यो एक उत्तम फ्यूजन CES र अडियो र दृश्य प्रविष्टि। म यो उपकरण अरूसँग साझेदारी गर्न सक्षम छु। मेरो श्रीमान् वायुसेनाको २ 23 बर्षे अनुभवी हुनुहुन्छ र युद्धबाट घर फर्केका वेटरनहरूसँग काम गर्छन्। यो यति धेरै मूल्यवान हुन्छ PTSD vets को लागी पीडा र उदासी कम गर्न मद्दत पुर्‍याउन र तिनीहरूको मानसिक ध्यान फिर्ता लिन। यसले मलाई डिप्रेसन र फाइब्रोमाइल्जिया दर्दको साथ साथै मेरो लागि पनि मद्दत गर्‍यो एडीएचडी। धन्यबाद, मैले यो आश्चर्यजनक कम्पनीको बारेमा थाहा पाइन!
“मैले ALERT मेरो किशोर छोरा, एमिलको लागि किनेको, जो स्कूलमा संघर्ष गर्दै थियो र ध्यान डेफिसिट डिसअर्डरको साथ पत्ता लगाएको थियो।
केही कारणका लागि, Emile एक recruse जस्तै अभिनय, सधैं आफ्नो कोठामा, एक्लै। जे होस्, जब Emile ले ALERT प्रयोग गर्‍यो, मैले तुरून्तै उनीमा परिवर्तन देखेको छु। ऊ राम्रो मुडमा उठ्यो, अक्सर गाउँदै र हाँस्दै। मेरो पतिले पनि (जसले घर भस्म भइरहेको खण्डमा याद गर्दैन) एमिले फेरि एनिमेटेड भइरहेको टिप्पणी गरे।
Emile अब आफ्नो भावनाहरु व्यक्त गर्दैछ। ऊ मिठो स्नेह भन्दा पछाडि अंगालो। उसले मौखिक जवाफ दिन्छ। विगतमा, उहाँ केवल आफ्नो काँधहरू हान्नुहुन्छ र कार्य गर्नुहुन्छ जस्तो कि उसलाई थाहा छैन वा वास्ता छैन। अब Emile आँखा सम्पर्क बनाउँछ र कुराकानी मा राम्रो छ। विगतमा, Emile एक लामो समय को लागी आफ्नो भावनाहरु को वरिपरि, र जान दिनुहुन्न। अब, ऊ पछाडि उफ्रिन्छ र केही समय मा चीजहरूमाथि लाग्दछ।
एमिलका दुई शिक्षकले उनको आत्मविश्वासमा सुधार आएको याद गरे। ऊ लजालु स्वभावको थियो तर अब उनी मुस्कुराएर कुराकानी थाल्छ।
मैले यो पनि याद गरें कि Emile हस्तलेखनको साथ साथै लेखनको बारेमा उनको दृष्टिकोणमा पनि सुधार आएको छ।
सुधारको अर्को क्षेत्र खेल हो। यस अघि, एमिलेको फुटबल कोचले गुनासो गरे कि एमिले खेलको बीचमा बिचलित थियो, तर अब ती सबै परिवर्तन भएको छ। Emile एक स्टार जस्तै फुटबल लात छ। गत हप्ता उनी म्यान अफ द म्याच थिए!
एमिलका अन्य शिक्षकहरूले टिप्पणी गरे कि उनी स्कूलको काममा बढी चासो राख्दछन्, बढी सम्मानजनक छन्, बढी व्यवस्थित छन् र काम गर्न इच्छुक छन्। Emile पनि अधिक कामको लागि सोध्छन् र अन्य विद्यार्थीहरूलाई परेशान गर्दैन।
बेट्टी स्टीफनसन एशलेबाट प्रशंसापत्र
जुन 6, 2015
मेरो छोराले तपाईको अलर्ट मेसिन प्रयोग गर्दैछ केहि हप्ताको लागि ... शब्दहरूले न्याय गर्न सक्दैन मलाई यसको बारेमा महसुस भएको जस्तो गरीएको छ ... म यस बारेमा सबैलाई भनिरहेको छु ... सुन्ने सबैलाई।
प्याट्रिक यंग, ​​एमएड, एमएस, LCPC, CADC बाट प्रशंसापत्र
“मैले भर्खरै एउटा ALERT प्रो र Tru-Vu चश्माको2सेट को लागी एक अर्डर राखें। उत्पादनहरू मेरो स्कूलमा विद्यार्थीहरू र मेरो निजी परामर्श / न्यूरोस्टीमुलेशन अभ्यासमा ग्राहकहरूको साथ प्रयास गरेको कुनै पनि अन्य AVS उपकरण भन्दा धेरै उत्कृष्ट छ। र यदि यो पर्याप्त थिएन भने, म श्री सिभरको न्यूरोस्टीमुलेसन अनलाइन कोर्स मार्फत एक तिहाइ बाटोको बारेमा छु र धेरै आनन्द उठाइरहेछु। ”
विकी नगालाबाट प्रशंसापत्र
सेप्टेम्बर 3, 2014
“मैले डेभिड खरीद गरें ALERT प्रो मेरो छोरा जो ADD छ को लागी। उनको सब भन्दा ठूलो समस्या निदाउन कठिनाइ थियो - उनले भने कि उनी धेरै सोचिरहेछन् र निदाउन सक्दैनन्। मैले रिलक्स S सेसनको प्रयास गरें। यो जादु जस्तो थियो, त्यसैले म हरेक रात यसलाई प्रयोग गर्थें र कुनै असफलता बिना, ऊ निदाउन ढल्नेछ। अन्ततः मैले यो फेरि प्रयोग गर्नुपर्दैन - ऊ निदाउन सक्षम भयो। हरेक चोटि अब हामी सत्र चलाउँछौं जब ऊसँग निदाउन गाह्रो हुन्छ, तर प्रायः यो कुनै समस्या होइन। मैले भ्यूहोल चश्मा खरिद गरें ताकि हामी केहि सिक्ने सत्रहरू पत्ता लगाउन सक्दछौं। ”
ब्रुस हलबाट प्रशंसापत्र
“म अहिले एक हप्ताको लागि लाइट र साउन्ड मेशिन प्रयोग गर्दैछु, र मेरो अवस्थालाई भिन्न परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सक्षम भएको अनुभव गर्दैछु। अब मैले महसुस गरे कि मसँग थप्नु पर्छ वा एडीएचडी वा केहि समान र मेरो जीवनको अधिकांशको लागि यो थियो। मलाई कुनै विचार थिएन। यस्तो लाग्दछ कि यदि म कम्प्युटर हो कि मसँग पर्याप्त रैम छैन, जसले आफैंमा धेरै समस्याहरू, अपसेटहरू र निराशा निम्त्यायो। मैले पुस्तकहरू पढेको छु, यति धेरै परिवर्तनकारी पाठ्यक्रमहरू लिएको छु, र यद्यपि उनीहरूले मेरो जीवनमा भिन्नता देखाए पनि केही पनि मेरो स्थितिमा फरक पर्दैन। मैले मानिस र जीवनबाट टाढा छु जस्तो महसुस गरें। मलाई लाग्दछ कि मेसिनले केही फरक पार्दैछ, र अब म के बन्द भएको हेर्न सक्छु। यस्तो भएको छ कि म अन्धकारको कोठामा भद्रगोलबाट भरेको छु। म बढि बढ्छु र अरु समात्न को लागी बाहिर जान्छु म कसैलाई वा आफैलाई हैरान बनाउँछु। मैले पहिलो पटक भनेजस्तै मलाई लाग्यो कि कसैले प्रकाश खोलेको छ र म आफ्नो जीवनको धेरैजसो अवस्थामा देखिएको छु र यसको बारेमा केहि गर्न सक्छु। तपाईलाई धेरै धन्यवाद, निक्की, प्याट्रिक टिम्पोनसँग रेडियो अन्तर्वार्ताका लागि जसले मेरा आँखा खोलिदिनुभयो। "
लिन B बाट प्रशंसापत्र
दक्षिण क्यारोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका
"निक्की मेरो एक किशोर-हुड साथी हो र मैले भर्खर उनलाई फेरि भेटें। मैले उनको किताब र ALERT मेसिन पाए। अब मेरो पूरै परिवारले मेसिन प्रयोग गरिरहेको छ। मेरो १२-वर्षीय छोरा यसलाई पनि मन पराउँदछ। हाम्रो डाक्टरले याद गरे कि मेरो छोरा बढी केन्द्रित छ र भिन्नतामा छक्क परेको थियो। मैले उनलाई भने किनकि यो ALERT लाईट र साउन्ड मेशिनको कारणले हो। डाक्टर धेरै रुचि थियो र मैले उनलाई यो वेबसाइट खोज्न भनें। म उसलाई पहिले यसको बारेमा भन्न चाहन्न किनकि म निश्चित गर्न चाहान्छु कि यो प्लासबो प्रभाव होईन। अब, अरूलाई जो मेरो छोरालाई मेशिन प्रयोग गरेर केहि पनि थाहा थिएन उनीहरूले पनि परिवर्तन देख्यो जुन मैले देखिरहेको छु। धन्यबाद तपाईको पुस्तक र तपाईले लेख्नु भएको समय र अरुको जीवनमा लगानी गर्न लाग्नु भएको समयको लागि। "
म तपाईंलाई जानकारी दिन चाहन्छु, मेरो छोरोले दाऊद प्रयोग गर्‍यो प्रसन्नता प्रो, अब दुई पटक। पहिलो सत्र बुधबार बिहान थियो; ब्रेन बूस्टर C CES को साथ। म पहिलो सत्रको नतिजामा चकित भएँ। पछि, मैले उनलाई कस्तो महसुस गरें भनेर सोधें, तर उनले मात्र नभई उनलाई राम्रो महसुस गरे, उनी जोड दिए जब उनी यो भने। मैले वास्तवमा उसको अनुहार र आँखामा भिन्नता देखेको थिएँ। इमानदारीपूर्वक, म चकित भए, किनकि उसले पहिलो सत्रमा उसले १० बुद्धिको अंक प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्थ्यो! उनी दिनको बाँकी दिन अत्यन्तै खुशी र ऊर्जावान थिए। दोस्रो दिन, मैले ब्रेन बूस्टर3CES को साथ प्रयास गरें। फेरि, उत्कृष्ट परिणामहरू। उहाँ वास्तवमै आउँदै गरेको हप्ताहरूमा एक कार्यक्रममा जानको लागि उत्साहका साथ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र for-10 महिनाको कार्यक्रम पूरा गरे पछि आफैंको लागि नयाँ जीवन सुरु गर्दैछ। साथै, मैले उनलाई केही चुनौतीपूर्ण कम्प्युटर मस्तिष्क प्रशिक्षण खेलहरू गरेको देखेको थिएँ जुन उसको कार्यहरू अवलोकन गर्थे, र ऊ धेरै केन्द्रित र प्रेरित थियो, र आफैंलाई याद गरिरहेको थियो, उसको स्पष्ट सोच उत्साहका साथ! म केवल इच्छा गर्दछु जब म तपाईंको कम्पनीको बारेमा जान्दछु जब ऊ सानो थियो। मलाई असाध्यै निराश महसुस छ कि शिक्षक वा विशेषज्ञले उनी कहिल्यै देखेका थिएनन् रिटेलिन भन्दा बढि केहि पनि सुझाव गरेनन्, जसले उनको लागि केही गरेन। मैले आफैंमा केही सेसन गरें, र क्लेयरहेडिंग भावनाले मलाई अत्यन्त आनन्दित गर्यो! कागजको थुप्रोमा मैले हलो जोर्दैछु। साथै, मैले सिफारिश गरेको सबै पूरकहरू पनि मैले पाए, र उसले ती लिन थालिसकेको छ।
दीपा सोमानीबाट प्रशंसापत्र
शुगरल्याण्ड, TX, अमेरिका
मैले भारतमा श्री कृष्ण श्रीकांतबाट AVE को बारेमा सुनेको थिए। मैले यो भारतमा हुँदा मैले उनलाई किनें। मेरो माइग्रेन मुद्दाहरूको लागि र ध्यान र मेमोरी, सतर्कता र जागरूकता वृद्धिको लागि। मेरो छोरो पौंडी टोलीमा छ र यसको प्रयोग गर्न थालेको छ ... उसको ध्यानको अभाव र गैरजिम्मेवारपूर्ण मुद्दाहरूको हदसम्म समाधान गरियो। AVE यति सजिलो र मोबाइल बनाउनको लागि तपाईंको सबै प्रयासहरूको लागि गहिरो कृतज्ञता (यसलाई झोला र सार्नुहोस्)। मानव दु: ख र चिन्ता हटाउनका लागि धन्यबाद।
Sharon Metcalf बाट प्रशंसापत्र
“मैले तिमीलाई मेरी छोरी ओलिभियाको बारेमा केही समय अघि लेखेको थिएँ, जुन 6th औं कक्षामा छिन् र थपिएकी छन्। उनीसँग धेरै वर्षदेखि डेभिड भएको थियो तर हाम्रो समस्या सँधै यसको प्रयोगमा लगातार आएको थियो। यो विशेष गरी यस वर्ष गाह्रो भयो जब उनले मध्य विद्यालय सुरू गरेकी थिइन र स्कूल जानको लागि पहिले उठ्नुपर्‍यो। ओलिभिया दुई पटक असाधारण छ त्यसैले उनी प्रतिभाशाली छिन् तर केहि चीजहरूमा संघर्ष गरिरहेकी छिन्।
ऊ स्कूलमा विगत दुई week हप्ता सर्तमा गणित असफल भएको थियो। म वास्तवमै चिन्तित थिएँ र उसलाई विशेष एड गणित वर्गमा स्विच गर्न सबै तयार थियो। मैले उसलाई औषधीमा राख्न पनि विचार गरिरहेको थिएँ, जुन मैले जहिले पनि टाढा रहन प्रयास गरें, तर मैले निर्णय गरें कि मैले औषधीको खोजी गर्नु अघि उनलाई प्रकाश र ध्वनि मेशिनको प्रयोग बढाउनु पर्छ। तपाईंले सुझाव दिनुभयो कि मैले उनलाई बिहान आउँनु भन्दा आधा घण्टा अघि उनको प्रकाश र ध्वनी मेसिन राखें। म अहिले एक महिना भन्दा बढी गर्दै आएको छु।
म ओलिभियाको आईईपी बैठकबाट उनलाई विशेष एड गणित कक्षामा बदल्नको लागि भर्खरै फर्कें जब मलाई भनियो कि ओलिभियासँग अहिले उनको नियमित एड गणित कक्षामा "बी" छ र उनको शिक्षिकाले महसुस गरेकी थिइन् कि उनले हालसालै केही "क्लिक" गरेको छ र उनी अब "पाउँदैछ।" म स्तब्ध भएँ! म धेरै खुसी छु र उनीमा गर्व छ! उनको प्रतिभाशाली भाषा कला शिक्षकले पनि भने कि उनीसँग कक्षामा "राम्रो संगठनात्मक कौशल" छ र उनी आफ्नो दाईंमा काम पाउँन र यसलाई व्यवस्थित राख्न सक्षम छन्। यसले मलाई चकित पनि बनायो किनभने ओलिभिया, धेरै जसो ADD /एडीएचडी, योजना र संगठनको साथ संघर्ष गर्दछ। मैले उनको भाषा कला शिक्षकलाई सोधें कि यदि यो सबै वर्ष भैरहेको छ, वा यदि उसले हालसालै सुधार देखेको छ। उनले भनिन् कि उनले हालसालै यससँग अझ बढी सुधार देखेको छु जुन म उनको डेभिडको बढेको प्रयोगलाई पनि श्रेय दिन्छु।
म मेरो छोरीलाई उसको ADD गर्न मद्दत पुर्‍याउने र औषधीको साइड इफेक्टको बारेमा चिन्ता लिन नहुने कुराको लागि अत्यन्त आभारी छु। ओलिभिया सानो छ र चराको शुरूआतको भोक छ र मैले गर्न चाहेको अन्तिम कुरा उनलाई उत्तेजक औषधीमा राख्नु हो। मेरो पेटले सँधै मलाई भनेको छ कि मेरी छोरीको ADD को लागी औषधि जाने बाटो थिएन।
मैले ओलिभिया AVE सुरु गर्नु भन्दा पहिले मैले धेरै अनुसन्धान गरें किनभने उनी मेरो बच्चा हुन् र म उनीसँग कुनै पनि सम्भावनाहरू लिन सक्दिन। सबै अनुसन्धानले देखाउँदछ कि यसले काम गर्दछ र मेरी छोरी जीवित प्रमाण हो। त्यसैले फेरि, म तपाईंलाई यस आश्चर्यजनक उत्पादन को लागी पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दिन र मलाई थाहा थियो कि यसले मेरी छोरी र हाम्रो परिवारमा संसारमा सबै फरक पार्यो। ”
आईरिस पिटलुगाबाट प्रशंसापत्र
कोरल गेब्स, FL
"म एसएमआर / बीटा सत्र प्रयोग गर्दैछु र परिणामबाट म धेरै खुसी छु। म धेरै काम गरीरहेको छु र मेरो काममा केन्द्रित छु। मलाई सँधै शंका लाग्थ्यो ममा एडीडी सुविधाहरू थिए तर यसलाई कहिले पनि परीक्षणमा राखेन। मेरो अभ्यासमा, मैले विभिन्न लक्षणहरूको लागि धेरै उपचार योजनाहरू विकास गरें जुन ठूलो सफलता सम्भावना देखाउँदै छ। मैले योजनाको भागको रूपमा तपाईंको उत्पादहरू समावेश गरेको छु। अहिले सम्म, सबै उपकरणहरू मेरो बिरामीहरू द्वारा घर मा प्रयोग भइरहेको छ र यो सबै राम्रो छ, विशेष गरी चिन्ता विकार र ADD /एडीएचडी। "
मार्क Szymczak बाट प्रशंसापत्र
सान फ्रान्सिस्को, CA
नोभेम्बर 9, 2010
“दुई बच्चा र एक श्रीमतीको बुबा (र यो म आफैं) नम्र छ एडीएचडी, म हिचकिचाएँ 'हामीलाई सबै हुक' साच्चिकै उत्पादन बुझ्नु अघि। म दुई दिन पछि एक विशेषज्ञ हुने ढोंग गर्दिन, तर निश्चित रूपमा अहिले यो उत्पादनहरू दोषपूर्ण पारिवारिक गतिशीलता र सामयिक विद्यालय "अवरोधहरू" लाई पार गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दा सहजै महसुस गर्छु। चार दिन समयमा, हामी पहिले नै डेललाईट प्रो र ALERT सत्रहरू प्रयोग गरेर सफल भएका छौं:
(१) सबैलाई निदाउन र सभ्य समयमा सुत्नुहोस् (stars ताराहरू)
(२) बिहानको तालिका सुरु हुनुभन्दा पहिले मलाई शान्त गर्नुहोस् (stars तारे)
()) मेरो १० बर्षेको छोरा लाई अवरोध बिना आधा घण्टा पढ्न दिनुहोस् (stars तारे)
()) स्कूल टेस्ट र बास्केटबल / टेनिस खेलहरू भन्दा पहिले मेरो छोरीको फिक्री कम गर्नुहोस् (निर्णायक अझै बाहिर छ, तर म आशावादी छु)
यदि तपाईं अविभावक हुनुहुन्छ भने कलेजले तपाईंको बच्चाहरू, आफैं वा कुनै अन्य प्रियजनहरूमा साँच्चै लगानी गर्न पर्खदैन, यो उपकरणले तपाईंको घरमा एक्स-बाक्स वा निन्टेन्डो बदल्नु पर्छ। ”
पिटर रेमेन्टबाट प्रशंसापत्र
अक्टोबर 27, 2009
“म तपाईंको कम्पनी र डेभिड भेट्टाएकोमा धेरै आभारी छु। यसले मेरो लागि अवसरको संसार खोलिरहेको छ। म DAVID को प्रयोग गरीरहेको छु छ महिना भन्दा बढी को लागी। मैले पहिले भन्दा कम टाउको दुख्ने पाएको छु र म धेरै राम्रो समग्र स्वास्थ्यको आनन्द लिइरहेको छु। यो अन्तिम वसन्त, मैले यो पनि पत्ता लगाए कि म थपेँ। डेभिड यो विशेष अवस्थाको लागि पनि उत्तम उपकरण हो भन्ने कुरा कत्तिको संयोगको कुरा हो? ”
कर्ट स्कटबाट प्रशंसापत्र
सेन्ट पल, मिनेसोटा
फेब्रुअरी 17, 2009
"जब मैले डेभिड प्रयोग गरें, मँ धेरै भन्दा बढी चीजहरू भेट्टाउँछु जुन तपाईंको मसिनको बारेमा मलाई मनपर्दछ। म यो गत साताको अन्त्यमा केहि साथीहरूसँग प्लेमा गएको थिएँ र उनीहरूले मलाई के भयो भनेर सोधे। मैले हिउँदको ब्लुज महसुस गरेको छु मैले छोटो समयमा तपाईंको उत्पादन प्रयोग गर्दैछु। म यस्तो कुहिरोमा उठ्छु र अब यो केवल आनन्दको कुरा हो। म काम गर्दा दिनभरि गाउँदै र गुनगुनाउँदैछु। म CES मात्र प्रयोग गर्दछ टिभी हेर्दा वा संगीत सुन्दा। Minutes० मिनेट पछि म एकदम शान्त र निर्मल महसुस गर्छु।
आजीवन एडीएचडी बाहेक, मेरो खुट्टामा न्यूरोपैथी छ किनकि म पनि २IV बर्षदेखि एचआईभी / एड्सको साथ बाँचिरहेको छु, त्यसैले मेरो तनावको स्तरलाई जाँचमा राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले आफ्नो जीवनलाई सन्तुलनमा राख्न धेरै वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गरेको छु र अझै पनि जीवन्त र जीवित छ तर यो जाडो मलाई धेरै गाह्रो भएको छ र डिप्रेसन / चिन्ता बढ्दो थियो। मैले तपाईंको डेभिड प्रयोग गरेको तीन दिन पछि नै त्यस्तो भिन्नता पाएँ।
म मेरो नयाँ DAVID छनौट गर्न को लागी SAD को लागी कुनै दिन लाईट बक्सको प्रयोग गर्‍यो। मैले तपाईंको एडीडी औषधि तपाईंको उत्पादन र मेरो डाक्टरको सुपरिवेक्षणको साथ एक तिहाई घटाएको छु। ”
डेनियल बाट प्रशंसापत्र
“मेरो छोरा र म प्रयोग गर्दै आएका छौं डेभिड अलर्ट १ days दिनका लागि (प्रति दिन एक पटक)। हामी दुबै एडीएचडी छ र हामी दुबै वर्षौंसम्म औषधीमा छौं। सबै अपेक्षाहरू बिरूद्ध, मेरो छोरो पाँच दिनको लागि औषधी बाहिर छ र यो राम्रो राम्रो हुँदैछ! महिनामा एकचोटि हामीले उसलाई एक दिनको लागि औषधी राख्न खोज्यौं तर हाम्रो परीक्षणले हामीलाई निराश बनायो: औषधिविना नै, हाम्रो छोरोको व्यवहार धेरै तनावपूर्ण थियो। औषधी स्कूल र एकाग्रताका लागि राम्रो काम गर्दछ तर म भूखको अभावमा चिन्तित छु जुन औषधीको साइड इफेक्ट हो। हाम्रो छोरा सामान्य तौल मा लगाईरहेको छैन राम्रो प्रगति गरिरहेको छैन। औषधी बिना नै हाम्रो छोरो एकदम चिन्तित भयो र आफैं र अरूलाई जोखिममा पार्‍यो। साँझमा, एक पटक औषधीले काम गर्न बन्द गर्यो, ऊ हामी सबैसँग धेरै प ?्क्तिहरू थियो र मैले आफ्नो समय वास्तवमै "उसले अब के गर्ने छ?" भन्ने सोचमा जोड दिए। त्यसोभए, केवल १ days दिन पछि, हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनहरू छन्। मैले एक हप्ताको लागि औषधी पनि बन्द गरें। मैले सत्र अत्यन्तै रमाईलो पाएँ र ती पाएको पछि म आफैंलाई धेरै स्फूर्ति पाउँदछु। हाम्रो छोरा र म साँच्चै संग हाम्रो दैनिक सत्र रमाईलो गर्दै छौं डेभिड अलर्ट र हामीलाई यो गर्न सम्झाउनु आवश्यक पर्दैन किनकि यो गहिरो आरामको स्थितिमा फस्नको लागि बरु रमाइलो छ। हाम्रो छोरा धेरै केन्द्रित छ। अन्ततः सम्पूर्ण परिवारले यसलाई प्रयास गर्‍यो। मेरो श्रीमान् धेरै तनावपूर्ण वातावरणमा घण्टा काम गरिरहेको छ। उनी भन्छन कि खानाको विश्रामको बखत काममा आराम गर्नु र "पछि फेरि पूर्ण गतिमा" हुनु राम्रो तरीका हो। हाम्रो अन्य दुई बच्चाहरुको एडीएचडी छैन तर आराम गर्न सबै यस्तै रमाईलो गर्नुहोस्। त्यसो भए यहाँ सबैका लागि काम गर्न सकिन्छ जस्तो देखिन्छ, ADHD वा छैन! "
पॉल Botticelli बाट प्रशंसापत्र
पूर्वी सेताउकेट, न्यूयोर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
अक्टोबर 27, 2008
"म तपाईं संग एक सफलता कहानी साझा गर्न चाहन्छु। यसमा मेरो पहिलो अध्ययन विषय डेभिडको प्रयोग गरेर समावेश छ जुन गत वर्ष सुरू भयो। उसको नाम टीसी, उमेर १। हो। उनले कलेजमा भर्खरैको वर्ष पूरा गरेका थिए र शैक्षिक रूपमा महत्वपूर्ण समस्याहरू थिए। ऊ आफ्नो नयाँ वर्षको अवधिमा वेलबुट्रिन र कन्सर्ट्टामा थियो, कुनै फाइदा भएन। उसले नराम्ररी अण्डरचेभ गर्यो र संगठित हुन र ध्यान केन्द्रित गर्न भारी कठिनाई भयो। उहाँ एक रक्सी र लागुपदार्थ मुक्त व्यक्ति हो, त्यसैले कुनै पदार्थ दुर्व्यवहार मुद्दाहरू थिएनन्। गर्मी भरमा मैले उनीसँग डेभिडको प्रयोग गर्न थालें। उनले आफ्नो मनोचिकित्सकको ज्ञान र सहयोगबाट उनको औषधि बन्द गरे र आठ आठ हप्तामा उनको मनस्थिति, मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार भयो जहाँ उनका आमाबुवाले स्कूल किन्थे र प्रयोग गर्नका लागि एउटा प्रणाली किन्थे। अनावश्यक रूपमा भन्नुपर्दा, उसले आफ्नो सोफोमोर बर्षको अवधिमा धेरै राम्रो गर्यो, औषधी पाएन र अहिले इटालीमा उसको न्यु योर्कको कलेजको विद्यार्थीको रूपमा आएको छ। जब टीसी थैंक्सगिभिंगमा भ्रमणको लागि फर्कियो र नमस्कार भन्यो, ऊ चम्किला आँखा, केन्द्रित, मग्न, मुस्कुराइरहेको थियो; भर्खरै फेला परेको आत्मविश्वासलाई ऊ उदास पारेर हेरेर खुसी लाग्यो। त्यसोभए, तपाईंले गर्नुभएका कामहरू गर्न प्रयास गर्नुभएकोमा धन्यवाद। ”
ग्राहम जे। हैडलिंगटनबाट प्रशंसापत्र
मद्दत हात ब्रिटेन संगठन, संयुक्त अधिराज्य
जुन 27, 2007
"हामी दुर्घटनाबाट डेभिड पार गरेर आएका छौं, तर यो उपकरण कस्तो ईश्वरतान्त्रिक साबित भएको छ। DAVID ADD लड्न मद्दतको लागि एक शानदार समाधान साबित भयो। हामीले उपकरणलाई निरन्तर तनावबाट छुटकारा दिनका लागि र हेल्पिंग हेंड्स युके संगठनमा स्टाफमा शान्त मुड ल्याउन प्रयोग गर्यौं। हामी DAVID लाई पूर्ण सिफारिस र प्रशंसा गर्छौं र कुनै पनि संगठनहरु लाई प्रोत्साहित गर्दछौं जस्तै हाम्रो उपकरणलाई त्यस्तै उपकरण प्रयोग गर्न। हामी यस उपकरणलाई पर्याप्त सिफारिश गर्न सक्दैनौं। "
करेन रोडवेबाट प्रशंसापत्र
अप्रिल 24, 2007
“म तपाईंलाई कर्स्टनमा दुई हप्ताको अपडेट दिन चाहन्छु। जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छ उनी सीमानाको एडीएचडी हुन्। उनको शिक्षकले मार्च मा वसन्त ब्रेक भन्दा पहिले एकाग्रता को लागी एक चेकलिस्ट को उपयोग शुरू गर्नुभयो। औसतमा उनीसँग १० सम्भावित चेकमार्कहरू मध्ये or वा had छ। पछिल्लो हप्तामा उनीसँग प्रतिदिन एक उत्तम स्कोर छ। घरमा, ग्लेन र म उनलाई धेरै सहकारी, कम तर्कसंगत भेट्टाइरहेका छौं र उनी १०० पटक माथि र तल झारेर आफ्नो होमवर्क गर्दैछिन्। मैले आज शिक्षिकालाई घरमा काम पूरा गर्न भने र उनी विगत दुई घण्टा गुनासो बिना नै यसमा काम गरिरहेकी छिन्! अविश्वसनीय! सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनहरू हामी प्रति उनको दृष्टिकोण हो। उनी तुरुन्तै महसुस गर्छिन् कि उनले लाइनमा कदम चाले र लगभग तुरुन्त माफी मागे। उनको गुस्सा आन्दोलन लगभग अस्तित्वमा छैनन्। पीएस ग्लेनले टाउको दुखाइको सामना गर्नुपर्‍यो र उनको टाउको दुखाइदियो।
Sinead Ntory बाट प्रशंसापत्र
अक्टोबर 25, 2005
"केवल केही लाइनहरु तपाइँको प्रतिस्थापन ओम्निस्क्रिन को लागी धन्यवाद भन्न को लागी। यो विभिन्न समस्याहरूको संख्याको लागि आश्चर्य कार्य गर्दछ (अनिद्रा, विश्राम, ADD को साथ बच्चा) DAVID एक अद्भुत उपकरण हो। फेरि मँ भन्न चाहन्छु कि ओम्निस्क्रिन यति चाँडो बदल्नुभयो र यस्तो राम्रो मान्छे हुनुभएकोमा धन्यवाद। "
मार्क Meincke बाट प्रशंसापत्र
शेरवुड पार्क, अल्बर्टा, क्यानाडा
अप्रिल 17, 2003
"म ADD को साथ एक-33 वर्ष पुरानो मानिस हुँ, र मैले केहि साझेदारी गर्न चाहेको छु। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा, म ईन्ट्रेमेन्ट थेरेपी प्रयोग गर्दैछु। सामान्यतया, म मेरो दिमागको हर्ट्ज आवृत्ति परिवर्तन गर्न फ्ल्याशिंग लाइटको पूर्व-क्रमादेशित दृश्यहरू र स्पन्दित टोनहरू प्रयोग गर्दैछु।
मलाई थाहा छ अनौंठो लाग्छ, तर मैले फेला पारे पछि मन जिउँदो र उनीहरूको इन्टरमेन्ट थेरेपी गिज्मो, मैले मेरो एडीडीमा स्पष्ट सुधार देखेको छु।
म घरबाट बाहिर छु, र way 15 को सट्टा १ 45 मिनेटमा काम गर्ने बाटोमा छु
म कार्यमुखी रहनको लागि उत्तम छु
म साधारण कार्यहरू गर्न सक्छु जस्तो कि लुगा लिने, वा भाँडा माझ्ने, पहिले भन्दा धेरै छिटो
मेरो निराशाको स्तरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ
म सेल्सम्यान होइन, वा यस कम्पनीको एजेन्ट होइन, म केवल ग्राहक हुँ जसले अन्तर्ग्रहण उपचारबाट जीवन परिवर्तन गर्ने नतिजा प्राप्त गरेको छ। ”
मार्क Belisle बाट प्रशंसापत्र
सास्काटुन, सास्काचेवान, क्यानडा
अक्टोबर 4, 2003
“वाह, मैले मेरो डेभिड पाएको दुई महिना भयो, र मैले यसलाई दिनदिनै प्रयोग गरिरहेको छु। मलाई यो मन पर्छ। र म फोनमा यति सहयोगी भएकोमा डेभ र न्यान्सीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि त्यो मेरो खरीदको लागि महत्वपूर्ण थियो। धन्यबाद। मेरा साथीहरू भन्छन् कि म शान्त छु, मेरो हातको कम्पौं जस्तो ध्यान दिएन, र थपे पछि, म सत्र 83 appreciate र साथै केही अन्य मनपर्नेहरू, २० र a० लाई मन पराउँछु। सौन्दर्य यो हो कि यसले ध्यानलाई यत्तिको सजिलो बनाउँदछ। म निदाउनको लागि चिन्ता लिनुपर्दैन, जबसम्म म चाहन्न। मेरो रचनात्मकता सुधार भएको छ। म एक जीविकाको लागि ड्राइभ गर्दछु, र मलाई लाग्छ कि म अझै राम्रो केन्द्रित छु, डेभिडसँग सत्रहरूको लागि धन्यवाद। "
Gwenda ट्राभिसबाट प्रशंसापत्र
अल्बुकर्क, न्यू मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका
अगस्ट 9, 1999
“जीवन एक दुःस्वप्न थियो! हामीले वास्तवमै सोच्यौं जीवन एक दुःस्वप्न थियो। जबदेखि हाम्रो छोरो बालवाडीमा थियो। यो सबै शुरू भएपछि हो। हाम्रो छोरा, डेभिड एक धेरै खुसी बच्चा र खुशी बच्चा थियो। ऊ किंडरगार्टन सुरु गरेकोमा हामी धेरै उत्साहित थियौं किनभने ऊ यति उज्यालो थियो।
हामीले उसलाई प्रि-किन्डरगार्टन स्क्रिनि toमा लग्यौं। बोल्ने र सुन्ने बाट मोटर कौशलता सम्म सबै। नर्सहरू र थेरापिष्टहरू डेभिडबाट धेरै प्रभावित भएको देखिन्थ्यो। उसको सीप राम्रो थियो। तर त्यसोभए तिनीहरूले उहाँलाई ध्यानमा लिएको कुराको लागि जाँच गरे। र निस्सन्देह, उनको आमाको रूपमा मैले सोचे कि उसले असाधारण रूपमा राम्रो गर्यो। तर 'पेशेवरहरू' एकदम चाँडै मेरो पति र मैले डेभिडलाई स्कूलबाट एक बर्षको लागि रोक्न सिफारिस गरे।
त्यसबेला जब दुःस्वप्न सुरु भयो। पहिलो अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन जुन हामी राम्रोसँग गयौं। तर डेभिडको ध्यानाकर्षण अवधि it बर्षको उमेरसम्म हुनु पर्ने थिएन। हामीले किन्डरगार्टनबाट अन्त्य नतिजाको साथ अगाडि बढ्यौं, जुन स्कूललाई ​​डेभिड पक्राउ पर्‍यो जस्तो लाग्यो। हामी कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनौं। त्यसपछि पहिलो कक्षा आयो। समस्या झनै नराम्रो हुँदै गयो। एक समय पछि मैले अन्ततः स्वीकार गरे कि सम्भव दाऊदले वास्तवमा एक समस्या थियो। र फेरि स्कूलले दाउदलाई पछाडि धकेल्न भने। हामी सहमत भए।
डेभिडलाई त्यसपछि स्कूल मनोवैज्ञानिकद्वारा परीक्षण गरिएको थियो। धेरै वर्ष को लागी मानिस चिनेपछि, म उनको राय मा भरोसा गरे। उनले धेरै कौशलतापूर्वक हामीलाई भने कि उनको विचारमा दाऊदले एडी (ध्यान डेफिसिट डिसअर्डर) हुन सक्छ।
डाक्टर Ritalin संग शुरू भयो। एडीडीको साथ बच्चाहरूको लागि चमत्कार औषधि। मैले डेभिडको दैनिक गतिविधिहरू र मुडाहरूको डायरी सुरू गरें। परिस्थिति अझ राम्रो हुँदै आएको जस्तो देखिदैन। म अझै पहिलो कक्षा कक्षाका शिक्षकको दैनिक फोन कलहरू आउँदै थिए। त्यसैले खुराक बढाइएको थियो। फेरी कुनै परिवर्तन छैन। फेरि खुराक बढाइयो। त्यसबेला जब हामीले थोरै परिवर्तन देख्न थाल्यौं। तर फेरि खुराक बढाइयो। यस अवस्थामा डेभिडले बच्चाको आकारको लागि अधिकतम खुराक लिइरहेका थिए। उसको औषधिबाट साइड इफेक्टहरू हुन थाल्यो। यस बिन्दुमा डाक्टरले उसलाई सिलर्टमा परिवर्तन गरे। एक धेरै कम खुराक मा हामी चमत्कार हो के लाग्यो देख्न थाले।
डेभिडको स्कूलको काम पूरा भइरहेको थियो। ऊसँग त्यति धेरै गृहकार्य थिएन। र ऊ सामान्य डेभिडमा फर्क्यो जुन हामीले सोचेका थियौं हामीले हरायौं।
त्यसोभए DARE कार्यक्रम स्कूलमा शुरू भयो। यसले दाऊदलाई वास्तवमै असर ग .्यो। ऊ लागूपदार्थ सेवन गरेर थकित थियो, र उसले केहि थाहा पाएको कसैलाई थाहा भएन उसले केही पनि लिएको थियो। तिनीहरूले उसलाई a'druggy 'भन्न सक्छ।
यो तब हो जब हामी हाम्रो डाक्टर डा। आरोन काउफम्यानको घरमा गयौं र उनी क्यालिफोर्नियामा भएको यस उपचारको बारेमा अत्यन्तै उत्साहित भए। यसलाई डिजिटल अडियो भिजुअल एकीकरण उपकरण (DAVID) भनिन्थ्यो। हारूनले आफ्नो डेभिड र डेभिड मेशीनसँग मिल्नको लागि सक्दो प्रयास गर्न थाले। उनले दाऊदलाई रितेलिनबाट पनि हटाए।
पहिलो उपचार पछि त्यहाँ सानो परिवर्तन भयो। ऊ ज्याबरिंग बिना नै घर सडकमा सवार हुन सक्छ। यो लगभग १० माईलको सवारी थियो। हामी खुशी थिए। र निस्सन्देह हामीले उपचारलाई निरन्तरता दियौं। हामीले उसका शिक्षकहरूलाई कहिले पनि भनेनौं कि हामी दाऊदको ध्यान अभाव वा hyperactivity को बारेमा केहि गरिरहेछौं। हामी बस यो सवारी गरौं। तर प्रत्येक सत्र पछि, हामीले थोरै परिवर्तन देख्यौं। गृहकार्य भइरहेको थियो, त्यहाँ थोरै मात्र थियो र डेभिड ज्यादै खुशी थिए। यद्यपि हामीसँग घरमा केहि समस्याहरू थिए। दाऊदले राम्ररी हेन्डल गरिरहेका थिए। तर फेब्रुअरी, १ 10 1992 २ मा कुरा सुरु हुन थाल्यो। यो दाऊद फूलेको जस्तो थियो। होमवर्क न्यूनतम तल थियो, र मेरो श्रीमान् र म आउँदै गरेको अभिभावक-शिक्षक सम्मेलनको लागि साँच्चै तयार थियौं।
शिक्षकले "केहि घरमा परिवर्तन भएको छ" बाट सुरु गर्‍यो। डेभिड आश्चर्यजनक काम गर्दैछ! उसको गृहकार्य पूरा छ, उसको ग्रेड सकियो, र कक्षामा उनको ध्यान अविश्वसनीय छ! हामीले पहिलो धेरै राम्रो सम्मेलन दाउदका कुनै पनि शिक्षकसँग गरेका थियौं। उसको कक्षा सबै माथि आयो तर एउटा। र त्यो पढ्दै थियो। तर उसले आफूले बोक्ने सी राख्यो। हामीले दाऊदलाई उल्लेखनीय चीजहरू भएको देखेका छौं। राम्रो ग्रेडको परिणामको रूपमा उसले मेरिट रोलमा बनायो। यो ग्रेडका लागि यति धेरै छैन किनकि यो प्रगति हो।
डेभिडको नतिजाको रूपमा, हाम्रो डेभिड एक व्यक्तिको रूपमा बस्न धेरै सजिलो छ। त्यहाँ कुनै दोहोर्याइएको निर्देशनहरू छैनन्, उनको सानो बहिनी (जो छ वर्ष कान्छी छ) भन्दा बेवास्ता गर्ने झगडा छैन। जीवन अहिले कत्ति सजिलो छ। मैले डेभिडले हाम्रा डेभिड र परिवारलाई ल्याएको राहत, खुशी र धन्यवादको शब्दहरू पनि लेख्न सकेन।
समापनमा, मलाई लाग्छ कुनै बच्चासँग कुनै पनि अभिभावक जो कुनै प्रकारको, शिक्षा, व्यवहार, मनोवैज्ञानिक, कुनै पनि समस्या DAVID द्वारा सम्बोधन गर्नु पर्छ।
हाम्रो दुःस्वप्न अन्त्य गर्न र जीवन अलि सजिलो बनाउनको लागि धन्यवाद! "
मिशेल म्याकेबाट प्रशंसापत्र
11 सक्छ, 1998
“मेरो छोरालाई सधैं स्कूलमा ध्यान दिन गाह्रो भएको छ। उनी निलम्बन गरिएको छ, निष्कासित र ग्रेड १ बाट धेरै विद्यालयहरुबाट सारियो। कार्लले प्रोग्राम र थप सहयोगी पहुँच गर्न एडमन्टन सर्नुपर्‍यो।
कार्लले डेभिडको प्रयोग १ 1997 XNUMX of अक्टोबरमा गर्न थाले। डेभिड प्रयोग गरेदेखि मेरी आमाले कार्लमा प्रोत्साहनजनक परिवर्तनहरू देख्नुभयो। कार्ल घर र स्कूल मा अधिक सहकारी भएको छ।
हामी सुझाव दिन्छौं कि कुनै पनि एडीडी कठिनाइबाट पीडित बच्चाले यो उपकरण प्रयोग गरेर फाईदा लिनु पर्छ। ड्रग्स प्रयोग गर्नुको सट्टा, हामी कडा सुझाव दिन्छौं कि आमाबुवाहरूले कम्तिमा डेभिड प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्। "
डायना बिअरवर्थबाट प्रशंसापत्र
जनवरी 12, 1998
"मेरो छोराको ADD / ADHD छ र यसको परिणाम स्वरूप स्कूलमा ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या आएको छ। ऊ स्कूलको आँगनमा झगडामा पनि परेको छ। मैले DAVID को बारेमा पहिलो खबरमा सुनेँ। उसले नोभेम्बरको अन्त्यदेखि युनिटको प्रयोग गरिरहेको छ र ऊमा परिवर्तन एकदम नाटकीय छ। ऊ अब स्कूलमा झगडामा पर्दैन, र कक्षाकोठामा राम्रो ध्यान केन्द्रित गर्दछ। ऊ धेरै शान्त छ र अझ राम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम छ। उसको शिक्षकले पनि परिवर्तन देखेको छ। ऊ कक्षामा आफ्नो काम गर्दछ, र अब धेरै कम गृहकार्य छ। उनले मलाई टिप्पणी गरिन्, 'यस्तो लाग्छ कि ऊसँग अब ADD / ADHD छैन।' ऊ अहिले धेरै खुसी छ र ड्याभिड एकाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले जस्तो निराश हुँदैन।
म डेभिड सिफारिस गर्दछ जो कसैलाई ध्यान डेफिसिट डिसअर्डर वा ध्यान डेफिसिट Hyperactive डिसअर्डर संग बच्चा छ। परिणाम आश्चर्यजनक छन्! मेरो छोरालाई तपाईको सबै सहयोगका लागि धन्यबाद। "
डेब सेन्ट जीनबाट प्रशंसापत्र
डिसेम्बर 3, 1996
“कक्षा २ को अन्त्यमा, जून 94 my मा मेरो छोरा डारेनको विशेष एड शिक्षकको साथ छलफलमा उनले संकेत गरे कि ड्यारेनको निपुणता पढ्न नसक्ने र ध्यान दिन नसक्ने कारणले उनलाई कम्तिमा कक्षा nine को अन्त्य नभएसम्म सिकाई सहयोग चाहिन्छ।
ड्यारेनले एकदम सानो उमेरदेखि नै अत्यन्त सक्रिय व्यवहारको संकेत देखायो। बालवाडीको क्रममा उनले टेस्ट प्राप्त गरे र हामीलाई सूचित गरियो कि उनले AD / HD का सबै लक्षण देखाए। ड्यारेनले ईसीएसको पहिलो दिनदेखि नै शैक्षिक प्रणाली धेरै चुनौतीपूर्ण पायो, उसले पढ्न सिकेको कुराले हाम्रो परिवारलाई टाढा तुल्यायो। कक्षा एकको अन्त्य सम्म न त मेरो श्रीमान् न त म उहाँसँग पढ्ने कोशिस गर्नेछौं किनकि उसले लामो समयसम्म ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन स्टारको शब्दलाई पहिचान गर्न। उहाँ तारा, ठाउँ आदि संग मोहित हुनुहुन्छ, यो साधारण शब्दले उसलाई पूर्ण रूपमा निराश तुल्यायो जस्तै शव्दको जस्तै थियो र AND। यसले उनलाई पहिलो पटक आन्तरिक रूपमा पहिचान गर्यो कि ऊ आफू भन्दा भिन्न छ र त्यसले उसलाई धेरै चोट पुर्‍यायो। यसले पनि उनलाई जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनायो जहाँ उसलाई शैक्षिक क्षेत्रमा दर्द र सफलताको अभावको क्षतिपूर्ति दिन कुनै सफलता भइरहेको थियो। यो पक्कै पनि समस्याहरूको एक पूरै अन्य सेट गर्न को लागी एक शैक्षिक चुनौतीहरु को लागी उसले पहिले नै सामना गरिरहेको थियो।
अक्टोबर १ 1994 XNUMX। मा हामी डेभिडको बारेमा जान्नको लागि भाग्यशाली थियौं यद्यपि एक स्थानीय टेलिभिजन कार्यक्रम पछि साँझको सेमिनारमा आयोजना भयो। यस बिन्दुमा हामीले न त मेरो श्रीमान् न त गुमाउनु पर्ने केही कुरा हो न त म विश्वास गर्दछु कि औषधीको प्रयोगको माध्यमबाट लक्षणहरूलाई लुकाउने जीवनभर समाधान हो। हामीले आहार परिवर्तन सहित धेरै चीजहरूको प्रयास गरेका थियौं मात्र सीमान्त परिणामहरूको साथ यदि कुनै छ भने। हामीले अडियो-भिजुअल प्रवेश (AVE) इकाई खरीद गर्‍यौं र हाम्रो छोरालाई भविष्य दिन्थ्यौं।
नोभेम्बर १ 1995 XNUMX। को सुरुतिर मलाई डेरिनको स्कूलमा उनको बैठकमा उपस्थित हुन भनियो। व्यक्तिहरूको संख्या जुन उनीहरूले स indicated्केत गरिसकेका थिए उनीहरूको अघिल्लो बैठकभन्दा बढी थियो अनुभवबाट मैले सिकेका थिए खराब समाचारले टोलीको काममा लाग्ने काम गर्दछ जस्तो देखिन्छ खराब समाचार पनि ठूलो टोली हो। यसैले म अत्यन्तै चिन्तित भएँ, यद्यपि डारेनले पहिलेको भन्दा राम्रो गरिरहेको देखिन्थ्यो, वास्तवमै स्कूलको रमाईलो गरिरहेको थियो र उसले आफ्नो नोटबुक र होमवर्क असाइनमेन्टमा उनले हासिल गरेको मार्कबाट प्रमाणित सबै क्षेत्रमा वास्तविक सफलता पाएको छ।
त्यो बैठकमा मैले आजसम्म मेरो छोराको जीवनको बारेमा दोस्रो सब भन्दा राम्रो समाचार पाएको छु। पहिलो जन्ममा थियो जब मलाई उनको बाल रोग विशेषज्ञले भनेको थिए कि उसको खोपडीको आकारलाई असर गर्ने जन्म दोषले कुनै तरिकाले उसको बौद्धिक क्षमतालाई असर गर्ने छैन वा समयको साथ कुनै कस्मेटिक असर पार्दैन। समाचार यो थियो कि स्कूलले सोचेको थियो कि यदि डारेनले स्कूलको बाँकी वर्षसम्म आफ्नो शैक्षिक प्रदर्शन जारी राखे भने उसले विशेष कार्यक्रमबाट हटाउनुपर्नेछ किनकि उसले कार्यक्रमको पछाडि प्रगति गरेको थियो र नियमित कक्षामा सन्तोषजनक रूपमा केवल परिमार्जन सहित कार्य गर्न सक्दछ। भाषा कला कार्यक्रम। उहाँ हाम्रो काउन्टीमा पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले कार्यक्रम छोड्नुभयो किनकि उहाँ शैक्षिक रूपमा यसभन्दा पर जानु भएको थियो। बैठकमा उपस्थित सबै त्यहाँ हुनुको कारण, आफ्नो दयालु सफलताको यो पहिलो मा भाग थियो। त्यसैले म अनुमान गर्दछु कि कथाको नैतिकता यो हो कि यसले सब भन्दा ठूलो टोली लिन्छन् ठूलो समाचार साझा गर्न।
ठिक छ, हामी अब एक बर्ष पछि छौं र ड्यारेनसँग स्टन्डर्ड क्लासको विद्यार्थीको रूपमा पहिलो रिपोर्ट कार्ड छ। उसको सबैभन्दा कम अंक गणितमा थियो, %२%। उनका शिक्षक भन्छन् कि यसले कुनै पनि हिसाबले वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्दैन, यो उनको ग्रेड ma गणितको होमवर्क असाइनमेन्ट भन्दा आधा भन्दा कम पेश गर्नुको बावजुद यो चिह्न हो। विज्ञानमा उनको उच्च अंक%%% थियो। ऊ अहिले कक्षा चारको शीर्ष छेउमा पढ्दैछ। जुन दर उसले प्रगति गरिरहेको छ, म स्तब्ध हुने छैन यदि उसले मानक ग्रेड Language भाषा कला कार्यक्रम अनुसरण गर्न आवश्यक छ।
टिप्पणी अनुभाग हाम्रो सबैभन्दा ठूलो खुशी थियो, 'अरूसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। समूहको परिस्थितिमा राम्रोसँग काम गर्दछ। सहकारी छ। कक्षा मा हुनु साँच्चै रमाईलो छ।
अन्य धेरै परिवारहरू जस्तै हामीले पनि एक पीडा, कष्ट र निराशा सबै भोग्यौं जुन एक सीखने समस्यामा निहित छ। अडियो-भिजुअल प्रवेश प्रणाली, डेभिडले हाम्रो छोरालाई भविष्य दिइरहेको छ जुन हामीले दुई वर्ष पहिले सोचेको थिएन।
यदि मेरो एउटै मात्र इच्छा थियो भने, यो हुन सक्छ कि सबै बच्चाहरू जो एडीडी वा एडी / एचडीको लक्षणात्मक हुन सक्छन् वा कुनै सीधा कमजोरी जुन एक बुझ्ने कम्पोनेन्ट छ, कम से कम हाम्रो छोराले जस्तो सफलता अनुभव गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्दछ, किनकि प्रत्येक बच्चा भविष्यमा अधिकार हुनुपर्दछ। "
खुशी आमा बुबाबाट अधिक प्रशंसापत्र
“मिशेलको शब्दावली दुई हप्ताको अवधिमा करीव १ 15 शब्दबाट words 35 शब्दमा बढेको छ। पहिलो पटक, हामी उहाँसँग स्पष्ट कुराकानी गर्न सक्षम छौं। हामीले अब ऊ गर्न सक्ने थुप्रै नयाँ नयाँ चीजहरू अवलोकन गरेका छौं। मिशेलका लागि यी सबै महान उपलब्धिहरू हुन्। ”
- Penny Siminiuk, एडमन्टन, अल्बर्टा, क्यानाडा
“घर मा जोर्डनको दृष्टिकोण धेरै सुधार भएको छ। अब उनीहरु उनीहरुका बारेमा झगडा गर्नु भन्दा उनीहरुसंग छलफल गर्न सक्षम छन्। स्कूलमा उनको अंक र व्यवहार धेरै सुधार भएको छ। "
- प्याट्टी टकर, एडमन्टन, अल्बर्टा, क्यानाडा
“आदमले निन्द्रा, विद्यालय र सामाजिक सीप जस्ता धेरै क्षेत्रमा सुधार गरेका छन्। हामी धेरै खुसी छौं। ”
- आइलीन हन्ना, एडमन्टन, अल्बर्टा, क्यानाडा
“रायन अहिले धेरै सहकार्यमा छन्। उसले भर्खर home%% को अंक ल्याएको एउटा कोर्समा ऊ अन्तिम सेमेस्टरमा असफल भएको थियो। "
- डेबी स्नाटिनेचुक, एडमन्टन, अल्बर्टा, क्यानाडा
“काइल सुतिरहेकी छिन्। ऊ पूरै सत्रमा बस्न सक्षम भयो र आफैंले रमाईलो गर्यो !!! "
- जेनिन हेपबर्न, एडमन्टन, अल्बर्टा, क्यानाडा
“डलास नाटकीय परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ। उहाँ अब धेरै शान्त र आराम छ। ऊ स्कूलमा धेरै राम्रो प्रगति गरिरहेको छ र तीन ग्रेड पोइन्ट लेभलको बराबर पुगेको छ। ऊ धेरै बसोबास गरेको छ। म यी कार्यहरू साँच्चिकै विश्वास गर्दछु! ”
- करेन हिह्न, एडमन्टन, अल्बर्टा, क्यानाडा